May 6, 2019 - MM Live News
ရွာထိပ်မှာ မိလ္လာရေလာသွန်သူတွေကို နံလွန်းလို့ မသွန်ဖို့ပြောရာမှ ရွာသားတွေကို သံတုတ်နဲ့ ရိုက်ဖို့လုပ်……
မိထ္ထီလာမြို့ ရွှေညီကို expressစားသောက်ဆိုင်မှ မိလ္လာကားဖြင့် မိထ္ထီလာကျောက်ပန်းတောင်းလမ်းပေါ်ရှိ မုန်တိုင်ရွာထိပ် ဆပ်ပြာကျင်းထဲသို့ မိလ္လာရေများနေ့ စဉ်သွန်ပါသည် ဆပ်ပြာကျင်းထဲမှမိလ္လာရေများသည် တံတားအောက်မှ မုန်တိုင်ဆလပ်မြှောင်း ထဲ သို့ ရောက်ပြီးထိုမှ တဆင့် မိထ္ထီလာကန်ထဲသို့ မိလ္လာရေများရောက်ရှိပါသည် ဘေးပါတ်ဝန်းကျင်မှ လွန်ခဲ့သော၃နှစ်ကျော်မှစ၍ စည်ပင်သို့ လိပ်မူ၍ ….. ခရိုင်အုပ်ချူပ်ရေး မြို့ နယ်အုပ်ချူပ်ရေး ကျေးရွာအုပ်ချူပ်ရေးမှုး ထံသို့ စာဖြင့် /လူကိုယ်တိုင် ၃ကြိမ်တိတိ တိုင်ကြားသော်လည်း အရေးယူမှု့ မရှိခဲ့ပါ၍ ယ္ခု စတုထ္ထအကြိမ်ထပ်မံတိုင်ကြားထားပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ခြံနီးခြင်းများမှာ မိလ္လာရေများနေ့ တိုင်းရှုရိုက်နေရ၍ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်ပါသည် မိထ္ထီလာကန်ထဲသို့ လည်း မိလ္လာရေများစီးဝင်နေပြီး မိုးရွာလျှင် ပိုမို ဆိုးရွားစွာဝင်ရောက်လျှက်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ မှ အနံမခံနိူင်လွန်း၍ လာမသွန်ရန်ပြောရာ အော်ဟစ် ဆဲဆိုစိန်ခေါ်ခြင်း သံတုတ်များကိုင်၍ရိုက်နှက်မည်ပြုခြင်း […]
ဒီနေ့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဝေဖန်မှုတွေများနေတဲ့ လူမြင်ကွင်း ကားပေါ်က လင်မယားပါဆိုတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး….
May 6, 2019 May 6, 2019 MM Live
လူမြင်ကွင်း ကားပေါ်မှာ ရဲများရဲ့ စစ်ဆေးခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ လင်းမယားပါဆိုတဲ့ ပို့တစ်ခုကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေအမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်နေပါတယ်..။ အဆိုပါ ဝေဖန်မှုများရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် နှစ်ခုကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကားပေါ်မှာ အတွဲမိတဲ့ Video ကို Share ပြီး လှောင်သလိုလိုပြောင်သလိုလို ဟာသလုပ်သလိုလို တင်တဲ့သူမှန်သမျှ ကျွန်တော် unfriend လုပ်ပါမယ် ။ လူ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာမရှိတဲ့သူတွေနဲ့ ကျနော် ခင်လဲမခင်ချင်သလို ပတ်လဲမပတ်သတ်ချင်ပါဘူး ။ကားဆိုတာ အများပိုင်နေရာမဟုတ်ပါဘူး Private နေရာပါ ။ ဒါကိုမှ ကားထဲမှာ ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် လိင်ဆက်ဆံတာပဲလုပ်လုပ် က ပဲ ကနေနေ အပြင်လူကိုမထိခိုက်သ၍ ဒါက သူ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပါ ။ ကဲအပြင်လူက ကားလှုပ်နေတာမြင်လို့ စိတ်ကူးနဲ့ မှန်းပြီး စိတ်အနှောက်အရှက် ဖြစ်တယ် ဆိုရင်လဲ ၊ အများပြည်သူအနှောက်အရှက်ဖြစ်စေမှုနဲ့ […]
သင့် ရှယ်ရာ တစ်ချက်ဖြင့် လူပေါင်းများစွာရဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာကို ကယ်တင်ပေးလိုက်ပါ ဒီပုံထဲကလူကြီးကို ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ….သွေးတိုးတာ ၁၆၀ ဆိုရင်မခံနိုင်တော့ဘူး…. လည်ပင်းတွေအစ်ထလာပြီးစုံးဖမ်းသလိုနတ်မမ်းသလိုလိုနဲ့ ဂေါင်းတွေကိုက် မျက်စိတွေမှုန်ဝါးလာပြီး ခြေထောက်တေလက်တေ လေးလံထိုင်းမှိုင်းလာပြီး လေငန်းဖြတ်ဖို့ ချည်လုပ်နေတယ်…. အရင် ၂ ခါလဲ လေငန်းဖြတ်ဖို့ လုပ်လို ဆေးရုံ ပြေးရသေးတယ်….သူပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ထား…..အခု သွေးမတိုးတော့ဘူး ….. သူပြောတာတော့ ၃ ရက် ဆက်တိုက် မနက်တကြိမ် နေ့ လယ်တကြိမ် ညတကြိမ် ၃ ရက် ဆက်သောက်ရင် အနဲဆုံး ၆လ လောက်ကတော့ အေးဆေးပဲတဲ့ စားချင်တာစားလို့ ရတယ်ဆိုပဲ….. ကျနော်ကတော့အခုမှသောက်ထာဆိုတော့ သွေးတိုးကျတာပဲသ်ိသေးတယ် ….ဓါတ်ပြောင်းတာဖြစ်မယ်…. ဘဲဥတလုံး သံပုရာသီတလုံးအရည်အကုန်နဲ့ ဖျော်….အမယ်နည်းရှိသဗျ….. သံပုရာသီးကို တချမ်းခွဲ ဖန်ခွက်ထဲအရင်ထည့် အစေ့တွေဆယ်ပစ်လိုက်….ဘဲဥ ကို ခွဲထည့်လိုက် […]
ညောင်ဦးမြို့နယ် ငါ့လင်းပုတ်ကျေးရွာတွင် အသားကိုကိုင်မိခြင်း စားမိခြင်းမှ စဖြစ်သည့် ထူးခြာသောဖြစ်စဉ်….
ညောင်ဦးမြို့နယ် ငါ့လင်းပုတ်ကျေးရွာ၏ထူးခြားဖြစ်စဉ် ၄.၅.၂၀၁၉ နို့တိုက်သတ္တဝါများဖြစ်တတ်သောရောဂါပါ အသားကိုကိုင်မိခြင်း စားမိခြင်းမှ စဖြစ်သည် နောက်ပိုင်းမှာကူးဆက်မြန်လာသည် ကိုင်မိစားမိထားသူများအနေနဲ့ ဆူးခြစ်မိရင်ပဲ ဒီလိုတွေဖြစ်လာတယ်။ အစမှာယားမယ် အဖုသေးသေးလေးထွက်လာတယ်။ ဝက်ခြံလိုပေါ့ ပြီးချက်ခြင်းနေညမှာပဲ သွေးပုတ်ရောင်ပြောင်းလာတယ်။ နောက်တစ်ဖြေးဖြေး ကြီးလာတာပါပဲ။ အခုယူဆနေတာကတော့ anthrax လို့ယူဆနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပါရဂူကိုယ်တိုင် လာရောက်အဖြေပေးဖို့တော်တော်များများစောင့်နေကြပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံတွေကတော့ ဖြစ်နေတဲ့သူတွေပါ။ ဒါကြောင့်ရွာမှာဟောပြောခြင်း တိမွေးကုမှ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းပြုလုပ်နေပါသည်။၅.၅.၂၀၁၉ ယနေ့မှာတော့ကုသမှုအနေနဲ့ ဆေးရုံတစ်ယေက်တင်ထားတယ်။ သူ့အနာရဲ့အရည်ကြည်ကိုယူပြီးရန်ကုန်ဓါတ်ခွဲခန်းပိုိ့မယ်။ ပြီးမတိကျတဲ့ရောဂါအဖြေတစ်ခုရမှာပါ။ ကာကွယ်မှုအနေနဲ့ ရွာကိုလာပြီးဖြစ်နေတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေ …… လောလောဆယ်အမဲသားစားမိတဲ့သူတွေကိုကာကွယ်ဆေးအနေနဲ့ brucipro နဲ့ ciprofloxတိုက်ကျွေးပေးပါတယ်။ ၇ရက်လာတိုက်မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ ကူးဆက်မြန်တဲ့anthrax လို့အတိကျမသိသေးပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးတိုက်ကျွေးထားပါတယ်။ unicode ညောငျဦးမွို့နယျ ငါ့လငျးပုတျကြေးရှာ၏ထူးခွားဖွဈစဉျ ၄.၅.၂၀၁၉ နို့တိုကျသတ်တဝါမြားဖွဈတတျသောရောဂါပါ အသားကိုကိုငျမိခွငျး စားမိခွငျးမှ စဖွဈသညျ နောကျပိုငျးမှာကူးဆကျမွနျလာသညျ ကိုငျမိစားမိထားသူမြားအနနေဲ့ ဆူးခွဈမိရငျပဲ […]
နင်​နဲ့ငါ လင်​မယားလို​နေရ​အောင်​​ပြောပြီး ၆နှစ်​သမီး သားမယားပြုကျင့်​ခံရ…..
နင်​နဲ့ငါ လင်​မယားလို​နေရ​အောင်​​ပြောပြီး ​ခြောက်​နှစ်​သမီး သားမယားပြုကျင့်​ခံရ ( ရုပ်သံ ) ​ခြောက်​နှစ်​သမီးငယ်​ကို သားမယားပြုကျင့်​ခံရသဖြင့်​ ထိ​ရောက်​စွာ အမြန်​ဆုံးအ​ရေယူ​ပေး​စေရန်​ မိဘနှစ်​ပါးကဆို စစ်​ကိုင်းတိုင်း​ဒေသကြီး၊ ​ရွှေဘိုခရိုင်​၊ တန်​ဆည်​မြို့နယ်​၊ ရွာရှည်​​တောင်​​ကျေးရွာအုပ်​စု၊ သရက်​ကုန်း​ကျေးရွာတွင်​ အသက်​(၆)နှစ်​သမီးငယ်​ ​အိမ်​​အောက်​တွင်​ အိပ်​​နေစဉ်​ တရွာတည်း​နေ ​မောင်​​အောင်​ချမ်းဦးဆိုသူ (၁၅)နှစ်​ခန့်​က ၄-၂-၂၀၁၉ ရက်​​နေ့က သားမယားပြုကျင့်​ခဲရာ ……. သက်​ဆိုင်​ရာသို့ တိုင်​ကြားထား​သော်​လည်း အ​ရေယူ​ဆောင်​ရွက်​မှု အားနည်း​နေ​ကြောင်း ဧပြီလ ၂၉ ရက်​​နေ့က မိဘနှစ်​ပါးဖြစ်​သူ ကိုစိုးလင်းထိုက်​+မသင်းသင်းဦး တို့က News Watch ကို​ပြောပါတယ်​။ “ကျွန်​မက သမီးအိမ်​​အောက်​ကုတင်​တွင်​ အိပ်​​နေသည့်​အတွက်​ ကိုယ်​လုပ်​စရာရှိတာ​လေး​တွေ ရွာထဲသွားလုပ်​​နေ​တော့၊ မသိလိုက်​ဘူး၊ သမီးရဲ့​ပြောပြချက်​အရ ကျွန်​မသိရတာက၊ သမီးက အိမ်​​အောက်​ကုတင်​တွင်​ အိပ်​​နေတာကို၊ ကို​အောင်​ချမ်းဦး​ရောက်​လာပြီး…. နင်​နဲ့ငါ လင်​မယားလို​နေရ​အောင်​​ပြောပြီ သမီးကိုဆွဲ​ခေါ်ရာ […]
၆ ရက်ကြာပျောက်နေရာမှ သေဆုံးနေတဲ့ မိန်းကလေးအကြောင်း ခဲအို ဖြစ်သူကို စစ်ဆေးလိုက်သောအခါ….
အလုပ်ရှင်နေအိမ်၌ ညအိပ်သွားရောက်မည့်အသက်(၂၂)ခန့်မိန်ကလေးတစ်ဦးအားခဲအိုဖြစ်သူကဆိုင်ကယ်ဖြင့်လိုက်ပို့ကာလူသတ်မှုကျူးးလွန်ခဲ့သည်ဖြစ်စဉ်အားဝေဖန်မှုများဖြစ်ပေါ် ကျူံပျော် မေ ၆ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်ခရိုင်ကျူံပျော်မြို့နယ် အထောင်မြို့-သိမ်ကုန်းကျေးရွာ၌ နေထိုင်သူ အသက် (၂၂)နှစ်ခန့်ရှိ မိန်ကလေးတစ်ဦးသည် ဧပြီ (၂၈)ရက်နေ့ညနေ(၆နာရီခန့်အချိန်တွင်….. ၄င်းအလုပ် လုပ်နေသည် အထောင်မြို့ကနေအိမ်သို့ အိမ်ရှင်များခရီးသွားမှာဖြစ်သောကြောင့် ညအိပ် သွားရောက်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် ၄င်း၏ ခဲအိုဖြစ်သူ ဇင်မောင်မောင်(၃၁)နှစ်ဘ/ဦးရဲဝင်း(တရားခံ)၏ဆိုင်ကယ်ဖြင့်အတူသွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်…. ပျောက်ဆုံးနေခဲ့ရာ ယခုလ မေ(၄)ရက်နံနက်(၁၁)နာရီအချိန်ခန့်၌ သိမ်ကုန်းကျေးရွာနှင့် မန်းကြား ကျေးရွာ ကြားရှိ သုသာန်အနီး၌သေဆုံးပုတ်ပွနေလျက်ပြန်လည်တွေရှိရာ…. ၄င်းကျေးရွာမှပြည်သူများက ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ အကြောင်းကြားပြီးနောက် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ အဆိုပါမိန်ကလေးနှင့်အတူသွားရောက်ခဲ့သူ ခဲအိုဖြစ်သူအားဖမ်းဆီးစစ်ဆေးပြီးနောက် လူသတ်မှု ပုဒ်မဖြစ် အမှုဖွင့်လှစ်စစ်ဆေးဆောင် ရွက်ထားကြောင်း ၄င်းရဲစခန်းကသိရသည်။ 1/ သေဆုံးသူမိန်ကလေးကိုစတင်တွေရှိတဲ့အချိန်မှာ ပုတ်ပွနေပါပြီး ပြင်ပဒဏ်ရာများလည်းမတွေရှိရဘူးလေ ….ကျွန်တော်တို့ကတရားခံဖြစ်သူ၎င်း၏ခဲအိုကိုစစ်ဆေးရာ ခဲအိုဖြစ်သူကမိမိသတ်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် …. သေဆုံးသူနှင့် တရားခံခဲအို ဖြစ်သူဟာ လွန်ခဲ့သော (၂)နှစ်ခန့်ထဲက ချစ်ကြိုက်နေကြောင်းကိုလည်းတရားခံကဝန်ခံ […]
ရုရှားနိုင်ငံတွင် ခရီးသည်လေယာဉ်မီးလောင်မှုကြောင့်း လူ ၄၀ ဦးသေဆုံး…( ရုပ် သံ )
ရုရှားနိုင်ငံတွင် ခရီးသည်လေယာဉ်မီးလောင်မှုကြောင့်အရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရပြီး ၄၀ ဦးသေဆုံး ၊ ၁၁ ဦးဒဏ်ရာရ ၂၀၁၉ မေ ၆ ရက် ၊ တောင်ကြီး ရုရှားနိုင်ငံပိုင် Aeroflot လေကြောင်းလိုင်းမှ Sukhoi SuperJet-100 လေယာဉ်သည် မော်စကိုမြို့ ၊ Sheremetyevo အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ မေလ ၅ ရက်နေ့ ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၁၈:၃၀ ချိန် ( မြန်မာစံတော်ချိန် ၂၂:၀၀ ) ချိန်တွင်ဝေဟင်သို့ပျံတက်သွားပြီး …. မိနစ် ၂၀ ခန့်အကြာမှာတော့ ပိုက်လော့မှအရေးပေါ်ဆင်းသက်ခွင့်တောင်းကာ အဆင်းတွင် မီးတောက်မီးလျှံများနှင့်အတူဆင်းသက်လာပြီး ခရီးသည်များအားအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးများချက်ချင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း မီးလောင်မှုကြောင့်သေဆုံးသူ ( ၄ဝ )ဦး( ကလေးငယ်နှစ်ဦးအပါ ) နှင့်ဒဏ်ရာရရှိသူ (၁၁) ဦးရှိခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနများကဆိုပါသည် ။ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အဲရိုးဖလော့တ်လေကြောင်းလိုင်းမှ […]
မြို့မုံရွာ ဝင်မယ်ဆို အောက်ပါပုံလို အခွန်ဆောင်ဘို့လို 5.5.2019 စစ်ကိုင်းတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၏ ကွပ်ကွဲမှု အားကောင်းခြင်းကြောင့်လား မသိ မြို့မုံရွာသို့ လာရောက်ပြီး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြသော ဆိုင်ကယ်ခြင်းတောင်း ဈေးဆိုင်ကယ်များ ညအချိန် ဝင်ရောက်လာပြီဆိုလျှင် ဆိုင်ကယ်မင်းသားများမှ နောက်မှ ထပ်ချပ်မကွာလိုက်ပြီး ….. တရားမဝင်အခွန်များ လိုက်လံကောက်ခံနေသည်ကို ညစဉ်တိုင်းနီးပါး မြင်တွေ့နေရပြီး အခွန်မပေးဆောင်ပါက ဆိုင်ကယ်ချင်းကပ်ပြီး ခြင်းတောင်းအား ကန်ကျောက်၍ ဆိုင်ကယ်လဲသွားပြီဆို အခွန်ကောက်ခံသူများ ထွက်ပြေးသွားကြသည် ….. ဈေးခြင်းတောင်းပါ ဆိုင်ကယ်သမားများ ဆိုင်ကယ်လဲပြီး နဖူးကွဲဒူးပြဲ ဖြစ်ပြီး ရောင်းချပစ္စည်းများ ပျံ့ကျဲပြီး ဖြစ်ပျက်နေပုံများကို အိုးဘိုထောင် ရပ်ကွက်နေထိုင်သူများ မြို့သစ်ဈေးအနီး နေထိုင်သွားလာနေသူများ မြင်တွေ့နေရသည်မှာ …… အလွန်ပင်စိတ်မကောင်းစရာ မြင်တွေ့နေရသည်ကို ပြည်သူလူထုအတွင်း ဝေဖန်နေကြပြီး အောက်ဖေါ်ပြပုံပါလို အခွန်ပေးဆောင်ပါက အန္တရာယ်မပြု၍ […]